AKHRI: Maxay qaban doonaan guddiga xuduudaha Hirshabeelle ee la magacaabay? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta AKHRI: Maxay qaban doonaan guddiga xuduudaha Hirshabeelle ee la magacaabay?
AKHRI: Maxay qaban doonaan guddiga xuduudaha Hirshabeelle ee la magacaabay?
Jowhar (Halqaran.com) – Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha Hoose ee Maamulka Hirshabelle ayaa waxaa ay magacowday Guddiga Xaduudaha Hirshabeelle.
Wareegto kasoo baxday Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa lagu Magacaabey Guddiga oo ka kooban 9 Xubnood, kuwaas oo laga soo kala xulay Maamulada degmooyinka Hirshabelle Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Baarlamaanka.
Haddaba Hoos ka Akhriso wareegtada:
Guddiga Xuduudaha Hirshabeelle la magacaabay